ninka aduunka ugu lacagta badan - iftineducation.com
iftineducation.com – Waa kuma 10ka qof ee aduunka ugu lacagta badan?
Maanta waa maalin axad ah oo nasasho iyo hurdo lagu jiro. Inteena badan maanta shaqada, iskuulada iy baraatiiga waan ka fadhinaa. Hadaba waxaan eegeynaa 10ka qof ee aduunka ugu lacagta badan iyo sidii ay ku gaareen heerkaas.
1. Carlos Slim iyo reerkiisa waa nin ka so jeeda dalka Mexico oo lacagtiisa lagu qiyaaso 74 bilyan oo dollar. Ninkaan waa ninka aduunka ugu lacagta badan. Lacagta ayuu ka sameeyay dhowr shirkadood.
2. Bill Gates waa ninka aad wada taqaanaan ee mudo dheer ahaa ninka ugu lacagta badan aduunka. Bill Gates waa aabaha shirkada Microsoft ee sameysa barnaamijyada komburada sida Windows & Office. Lacagta Bill Gates ayaa lagu sheegaa 56 bilyan oo dollar. Da’diida waa 55 sano.
3. Warren Buffett waa nin kale oo mareykan ah waana ninka sadexaad ee aduunka ugu lacagta badan. Beesada uu haysto ayaa gaareysa 50 bilyan oo dollar. Da’diida waa 80 sano jir isagoo waxaas oo lacag ah ka sameeyay hal shirkad.
4. Bernard Arnault ninkaan waa 62 sano jir Faransiis ah waana ninka afaraad eee aduunka ugu lacagta badan. Lacagtiisa waxay gaareysaa 41 bilyan oo dollar.
5. Larry Ellison waa 66 sano jir, waana aabaha shirkada Oracle ee maraykanka waa ninka shanaad ee aduunka ugu lacagta badan oo qasnadiisa ay ku jirto 39.5 bilyan oo dollar.
6. Lakshmi Mittal waa nin hindi ah oo da’diisa tahay 60 sano jir. Ninkaan ayaa gabadhiisa ku guuriyay lacag ka badan 60 milyan oo dollar. Dhaqaalihiisa ayaa lagu qiyaasaa 31.1 bilyan oo dollar. Waxa uu leeyahay shirkad birta sameysa.
7. Amancio Ortega waa 74 sano u dhashay wadanka Spain oo ah ninka todobaad ee aduunka ugu lacagta badan. Dhaqaalihiisa ayaa gaaraya 31 bilyan oo dollar.
8. Eike Batista waa 53 sano jir u dhashay wadanka Brazil. Lacagtiisa ayaa lagu sheegaa 30 bilyan oo dollar.
9. Mukesh Ambani waa nin hindi ah oo 53 sano jir ah, waxa uu leeyahay shirkad lagu magacaabo Reliance. Lacagtiisa ayaa gaareysa 27 bilyan oo dollar.
10. Christy Walton waa haweenayda uu ka dhintay ninkii iska lahaa dukaamada Wal-Mart ee ugu weyn Maraykanka. Markii uu dhintay ninkeeda ayay dhaxashay lacagtiisii oo gaareysa 15.7 bilyan dollar iyo intii qasnadeeda ku jirtay taasoo ka dhigaysa dhaqaalaheeda 26.5 bilyan dollar. Da’deeda waa 55 sano jir.
Dadkaas waa 10 qof ee aduunka ugu lacagta badan. Ninka Sweden ugu lacagta badan ayaa liiska kaga jira nambar 13. Waa ninka lagu magacaabo Stefan Persson oo ah agaasimaha dukaamada dharka ee H&M lacagtiisa ayaaa gaareysa. 24.5 bilyan oo dollar.
ninka ugu taajirsan somalia